घट्यो कोरोना संक्रमण तर जोखिम कायमै :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
विज्ञ भन्छन्- लापरबाही नगरौँ, नयाँ भेरियन्टको जोखिम सँधै रहन्छ
कमला गुरुङ मंगलबार, माघ २५, २०७८, ०७:२५:००
काठमाडौं - कोरोना संक्रमणदर पाँच प्रतिशतभन्दा कम भए मात्र संक्रमणको अवस्थालाई सामान्य मान्न सकिन्छ। तर नेपालमा अझै पनि कोरोना संक्रमणदर १३ प्रतिशत छ।
हुन त कुनै बेला ५० प्रतिशत (माघ ८ गते) सम्म पुगेको कोरोना संक्रमणदर अहिले १३ प्रतिशतमा झरेको छ। नेपालमा ओमिक्रोन भेटिएपछि सबैभन्दा धेरै र कम देखिएको संक्रमणदर हो यो।
नेपालमा हाल कोरोना संक्रमित र संक्रमणदर विस्तारै घट्न थालेको छ। तर जोखिम अझै पनि छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार कोरोना संक्रमण माघ दोस्रो साता यता ओरालो लाग्न थालेको देखिन्छ।
माघ ११ गतेसम्म १२ हजार आसपासमा रहेको संक्रमितको संख्या हाल दुई हजार तल झरेको छ। आइतबार मात्र ९ हजार २५१ जनाको कोरोना परीक्षण हुँदा १ हजार ३८६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो संख्या माघ १ गते यताकै सबैभन्दा कम हो।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा कृष्णप्रसाद पौडेल संक्रमणदर ५ प्रतिशतभन्दा कम भए मात्र सामान्य मान्न सकिने बताउँछन्। तर नेपालमा अझै पनि संक्रमणदर १३ प्रतिशत भएकोल ढुक्क हुने अवस्था भने नरहेको डा पौडेलले बताए।
उनले भने, ‘संक्रमणदर पाँच प्रतिशतभन्दा तल नपुगेसम्म केही भन्न गाह्रो छ। कुनै बेला परीक्षण २७ हजारसम्म पुग्दा १२ हजार संक्रमित पनि पत्ता लागेको थियो। तर अहिले अस्पताल जानु परे वा केही काम परे मात्र कोरोना परीक्षण गराउँछन्।’
गते (माघ) जम्मा परीक्षण पोजिटिभ संख्या मृत्यु संक्रमणदर
१ १४५५६ ४६३६ ४ ३१.८५
१६ १३१४५ ३५४० ३२ २६.९३
१७ १६०८८ ५२९० ८ ३२.८९
१८ १७६७४ ५५८३ ९ ३१.५९
१९ ११५८२ ३६३७ १२ ३१.४
२० १२६०५ ३१७५ १४ २५.१९
२१ ११०७३ २५२६ १६ २२.८१
२२ ८५१३ १७१४ ९ २०.१३
२३ ९२५१ १३८६ ११ १४.९८
२४ ११३६५ १५७० १३ १३.२६
पुस २१ गतेबाट बढ्न थालेको कोरोना संक्रमण माघ दोस्रो साताबाट घट्न थालेको यो ग्राफले पनि देखाउँछ:
घट्दो संक्रमण बढ्दो मृत्यु संख्या
कोरोना संक्रमण दर घट्दै जाँदा मृत्युको संख्या भने बढेको देखिन्छ। कुनै बेला शून्यमा झरेको मृत्युको संख्या हाल दैनिक दशभन्दा बढी पुगेको छ। माघको दोस्रो साताबाट संक्रमण दर घटिरहँदा मृत्युको संख्या भने बढ्दो छ।
ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगी अझै पनि जोखिममा
नेपालमा हालसम्म ११ हजार ८२७ जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै ६० देखि ६९ वर्ष उमेर समूह (२४८४) का छन्। जोखिमका हिसाबले ७० देखि ७९ वर्ष उमेर समूह (२३५०) का दोस्रो र ५० देखि ५९ वर्ष उमेर (२२८१) तेस्रो नम्बरमा छन्।
संक्रमणदर घटेपनि जोखिम भने कम भइनसकेको सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुन बताउँछन्। विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घ रोगीहरु अझै पनि कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको उनले बताए। हाल मृत्यु भएकाहरु पनि ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीहरु नै बढी रहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘संक्रमित भएर त्यसबाट को बढी प्रभावित हुन्छन्? को बढी अस्पताल जाने संभावना हुन्छ भन्ने चरणमा अहिले हामी छौँ।’
नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई डा पुन दुई चरणमा विभाजन गर्छन्:
एक, संक्रमण फैलावट र नियन्त्रणको अवस्था
र, दोस्रो, उपचारात्मक अवस्था।
उनका अनुसार हामी अहिले उपचारात्मक अवस्थामा छौँ। अर्थात् संक्रमित भएर जोखिममा रहेका व्यक्तिहरु अस्पतालमा उपचार गरिरहेका छन्। संक्रमण कम भएपनि उच्च जोखिमको समूहमा रहेका समूहहरुले अझै पनि सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने र कोरोना संक्रमण पनि हुँदा अवस्था गम्भीर हुने संभावना त हुन्छ नै। अहिले धेरैजना सामान्य भन्दै घरमै पनि बसिरहेका छन्। सजिलैसँग उपचार गर्न सकिने अवस्था भएपनि ढिलो हुँदा गम्भीर अवस्थामा जाने र मृत्यु हुने संभावना बढी भयो।’
ओमिक्रोन जस्तो कमजोर भेरियन्टले पनि उनीहरुलाई असर गर्ने भएकाले सचेत रहन डा पुनको आग्रह छ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा पौडेलले दैनिक औसतमा ७/८ जनाको मृत्यु कोरोना संक्रमणका कारण भइरहेको उनले बताए।
उनले भने, ‘संक्रमण उच्च भएको बेला मृत्यु बढ्दैन। त्यसको एक सातापछि अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या बढ्ने हो। दुई देखि तीन हप्ता अघि केस बढेको थियो। तुलनात्मक रुपमा अहिले मृत्युको संख्या बढी देखिएको हो। यो पनि विस्तारै कम हुँदै जान सक्छ।’
लापरबाही नगरौँ, नयाँ भेरियन्टको जोखिम सँधै रहन्छ
पीसीआर परीक्षण कम भएको, धेरै संक्रमित भइसकेको र संक्रमितहरु घरमै बसेकाले संक्रमण कम भएको हुन सक्ने सूक्ष्म जीवाणु विज्ञ डा सन्तोष दुलालको विश्लेषण छ।
कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएपछि सरकारले लागू गरेका विभिन्न व्यवस्थाहरु पनि खुकुलो बनाउँदै लगेको छ।
संक्रमणदर घटेपनि यसलाई सामान्य रुपमा नलिन उनको आग्रह गर्दै उनी भन्छन्, ‘संक्रमण घट्दो छ। सरकारले सबै कुराहरु खोल्ने तयारी गरेको छ। तर अझै पनि यसलाई सामान्य लिनु हुँदैन। किनभने परीक्षणमा संक्रमणदर १३/१४ प्रतिशत देखिनु भनेको स्वास्थ्यका हिसाबले जोखिम नै छ।’
सेवाहरु खोलिदै गर्दा सरकारले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु कडाईका साथ पालना गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ। तर यी मापदण्ड पालना नभए कोरोनाको अर्को भेरियन्ट नआउँदा भन्न नसकिने उनले बताए।
‘यहाँ पो कोरोना संक्रमण घटीरहेको छ। तर रसियामा अहिले बढेकै छ। एकातिर बढ्ने अर्को तिर घट्ने भइरहेको छ।’ उनले भने, ‘सेवाहरु खोलिरहँदा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना हुनैपर्छ। ओमिक्रोन नै अन्तिम हो भनेर सोच्नु गलत हो। लापरबाही हुँदा अर्को भेरियन्ट नआउँला भन्न सकिदैन।’
यता इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा पौडेल संक्रमणदर घटेपन जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्छन्। नयाँ भेरियन्टको जोखिम सधै हुने भएकाले अनिवार्य रुपमा मास्कको र भीडभाड नगर्न उनले आग्रह गरे।
उनले भने, ‘जसरी छिटो बढ्दो त्यसरी नै घटीरहेको छ। विभिन्न सेवाहरुमा गरिएको कडाईलाई विस्तारै सामान्य गर्दै लैजाने हो। तर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु नै पर्छ। किनभने नयाँ भेरियन्टको जोखिम सँधै रहन्छ।’
ओमिक्रोन भेरियन्टः निको भएका संक्रमितमा पोष्ट कोभिडको समस्या कति? संक्रमितमा दोस्रो लहरमा जस्तो गम्भीर अवस्था नदेखिएकाले यो लहरमा पोष्ट कोभिडको समस्या पनि कम हुन्छ भन्ने चिकित्सकहरुको अनुमान छ। बिहीबार, माघ २०, २०७८